Dota2ကမကောင်းဘူး – စာရင်းအင်းများနောက်ဆုံး4ယခုနှစ်အဆိုးရွားဆုံး
Dota, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးကစားသမားနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခု 2, နေ့တိုင်းသွေးထွက်နေသည်.
တူရကီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ချစ်မြတ်နိုးသူသန်းပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Dota2အရာများမှာလုံးဝကောင်းမွန်စွာမသွားနိုင်ပါ. လစဉ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကစားသမား (၂) ဦး ၏စာရင်းဇယားသည်နေ့စဉ်ကစားသူများ၏အရေအတွက်ကိုကျဆင်းစေသည် 2014 ဒီဟာကAprilပြီလကတည်းကမကောင်းဘူး.
2011၎င်းစတင်ပြီးကတည်းကကစားသမားများကိုပိုမိုအဆက်မပြတ်ဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်တိုးတက်လာသည်။ 2015 မတ်လတိုင်အောင်ဤဂရပ်ဖစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်. 2015 ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်လအနည်းငယ်ကျဆင်းပြီးနောက်ပြန်လည်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းသည်၎င်းသည်ကျဆင်းသွားသည့်နေရာမှထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ 2016 အောက်တိုဘာအထိ.
2016 အောက်တိုဘာလတွင်ကစားသမား၏ကိန်းဂဏန်းများကိုထို နေ့မှစ၍ ပြန်လည်မထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါ. ငါတို့ထားခဲ့တဲ့လ 780.000 ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကစားသမားနှင့်အဆုံးသတ်သည့်ဂိမ်းမှာ ၂၀၁၄ Aprilပြီတွင်ဖြစ်သည်။(မြှင့်တင်ရေးထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့စာရင်းဇယားရှိခဲ့ပါတယ်.
အဘယ်ကြောင့်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဂိမ်းဤအချက်ရောက်ရှိခဲ့သည်သိချင်စိတ်တစ်ခုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။. သီအိုရီအမြောက်အများကိုဤအတွက်တင်ပြထားသည်။. သူတို့ထဲကကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုအရှိဆုံးအကဲဖြတ်ကြပါစို့။.
သင်သိသည့်အတိုင်း, Dota2၌, League of Legends ကဲ့သို့သောဒေသဆိုင်ရာလိဂ်စနစ်သည်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မရှိပါ. ဘယ်ကစားသမားကိုကမ္ဘာတစ် ၀ န်းမှာယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာထားတယ်. ထိပ်တန်းအဆင့်ကစားသမားခြောက်ယောက်တောင်မှသူတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုသဘောသဘာဝကိုပြသနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့်နယ်ပယ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူး။.
အတူတူရေတွက်ကြပါစို့; ကဗျာ, ကရူ, စကြဝာ, ကြောက်လန့်, ဒင်, EE, မှတ်ချက်, ပျံသန်းပါ, မျက်နှာ -, တစ်ကိုယ်တော်, s4 ကိုပိုမိုကြောင်းနှင့်. ဤအမည်များကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စ၍ အဆက်မပြတ်ကြားရသည်. ဂိမ်းမှာ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက်ဖျော်ဖြေသူအနည်းငယ်သာ. ဘယ်ဟုတ်မလဲ. ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုအသစ်ကိုပင်ဆင်ခြင်နိုင်သည် 4. ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ရေတွက်ကြကုန်အံ့. ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရေတွက်ကြည့်ရအောင်၊ ဒါပေမယ့်မလုံလောက်သေးဘူး. ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအမည်များကိုတစ်ချိန်လုံးမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းသည်မြင်ကွင်းသည်တိုးတက်မလာနိုင်ကြောင်းပြသသည်။.
ကြောင့်ဒေသခံလိဂ်စနစ်၏မရှိခြင်း, ပင်ထိပ်တန်းခြောက်ကစားသမားသူတို့ကဒီဂိမ်းကတဆင့်ဝင်ငွေဝင်ငွေမရနိုငျသောကွောငျ့, ဒီဆက်ဆက်နှင့်လာမယ့်အဆင့်သည်ထိုင်နှင့်သူတို့၏အသင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ကိုမတှေ့နိုငျ, ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြားဂိမ်းရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ်ကစားခြင်းအပြင်ဘက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှခေါင်း။ နေ.
ဒါကကျွန်တော်တို့တူရကီကနေဥပမာတွေပေးတဲ့အဆင့်ပဲ။ ဒေသခံအသင်းပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့မြင်ကွင်းတွေကDota'nın esp ပျောက်နေတဲ့ကစားသမားကိုနေ့တိုင်းရှာမတွေ့ဘူး။. ၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ Dota ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိဂိမ်း၏အသိအမြင်များကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။. ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါကစားသမားအရေအတွက်လျော့နည်းသွားသည်။.
ကျနော်တို့လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်, ဒေသတွင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိပါကအသင်းနှင့်ဒေသခံကစားသမားသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူပြသနိုင်မည်မဟုတ်ပါ. ၎င်းသည်နိုင်ငံမှကစားသမားအသစ်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။. ဒီအချက်အပြင်;
ဒေသဆိုင်ရာလိဂ်စနစ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအခြေခံတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်အဖွဲ့အစည်းမရှိသည့်အခါ, ဒေသဆိုင်ရာအခြေခံပေါ်မှာကြော်ငြာအလုပ်မရှိဘူး၊ ဂိမ်းကကစားသမားအသစ်တွေကိုမရောက်နိုင်ဘူး. Legends of Legends သည် YouTube မှကြော်ငြာများသို့ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်များ၌ပင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းများပြုလုပ်သည်ဆိုပါစို့။. ဤချို့တဲ့မှုကြောင့်ရလဒ်အနေနှင့်ကစားသမားအသစ်များမလာခြင်း၊ ဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဂိမ်းကိုစွန့်ခွာသည့်အခါကိန်းဂဏန်းများသည်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
Dota 2, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်၌တည်၏ “ဘေးထွက်ဂိမ်း” လှပသောဖြစ်ခြင်း၏ပုံစံအတွက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကိုပိုမိုမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။. ဒီချိစ်, သူဟာဒီဂိမ်းတွေဆီကနေငွေရေးကြေးရေးအရအမြတ်အစွန်းရအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒီဟာကသူဟာသူကိုင်ထားတဲ့ဆုနဲ့ဂိမ်းရဲ့အဆုံးပိုင်းအတွက်ပေးဆပ်ရတဲ့ဆုတွေအတွက်တကယ်ကိုမလွယ်ကူလှပါဘူး။.
လူတိုင်းကိုမေးမြန်းခြင်း. ငါတို့ကဒါကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေချင်တယ်မဟုတ်လား။? ငါတို့ Frostivious လာချင်တာမဟုတ်ဘူးလား။? အကယ်၍များ တူညီသောဆုလာဘ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူတူပင်လာပါကကျွန်ုပ်တို့ကစားမည်မဟုတ်လော။? ကျနော်တို့ကျိန်းသေကစား. သူသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမကကမ္ဘာအနှံ့ရှိကစားသမားများဖြစ်သောအထူးသဖြင့် Reddit တွင်လည်း၎င်းကိုဖော်ပြနေသော်လည်းရလဒ်မရှိပါ။.
diretide အစားဂိမ်းတစ်ခုသာထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းသည်သေချာပေါက်ဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ရှင်များသည်ပါ ၀ င်နိုင်သည် 10 သငျသညျ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုစျေးကွက်အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုကစားရန်ရှိသည် 50 လက်ဆောင်တစ်ခုအနိုင်ရသူတစ်ပြား.
ယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံအပြင်ကစားသမားကိုစိတ် ၀ င်စားစေမည့်ဖျော်ဖြေမှုကိုလျှော့ချခြင်းသည်ကစားသမားအရေအတွက်ကျဆင်းခြင်း၏အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ငါကြားနိုင်တယ် “မကြာသေးမီကသူရဲကောင်းနှစ် ဦး နှင့် 4-5 item ဒီဆက်ဆက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရောက်ရှိလာခဲ့သည်” သင်ဘာပြောတာလဲ. မင်းကသူရဲကောင်းတွေအကြောင်းမင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဂိမ်းထဲမှာဥက္ကာပျံ Hammer နဲ့ Aeon Disc ဘယ်လောက်များများတွေ့ရလဲ? Nullifier ကိုတောင်ဘယ်လောက်မြင်ရလဲ? အလားတူပင်ဤအသစ်သောပစ္စည်းများ, ဒါ့အပြင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထက်ပိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်. ပြောင်းလဲမှုသည် MMR စနစ်ကိုပြောင်းလဲပြီး Badge စနစ်ဖြင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။.
အထက်ပါပြောင်းလဲမှုမှာသေချာသည်။ နောက်တစ်ခါ Badge ရောက်လာသည့်အခါပျမ်းမျှကစားသမား၏ကိန်းဂဏန်းများသည် Badge system ရောက်ရှိလာချိန်တွင်လူများကအသစ်အဆန်းထွက်လာသည်ဟုထင်ခဲ့ကြသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။. စနစ်သစ်သည်သရုပ်ဖော်ထားသော MMR စနစ်ဖြစ်သည်. လူတွေကဒီအခြေအနေကိုမကြိုက်ဘူး။.
ဤအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်။ ဂိမ်းသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် Dota2၏ပြproblemsနာများကိုတတ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်. မင်းရဲ့အကြံအစည်တွေကိုလည်းငါတို့ကြားချင်ပါတယ်. သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာပို့စ်များတွင်ဖော်ပြနိုင်သည်။.
E-Sports မွေးဖွားခြင်းသည်သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ အသက်ကြီးပါသည်။. 70၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် Arcade Hall များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လူငယ်များအတူတကွကစားခြင်းနှင့်အတူတကွယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုပေါင်းသင်းခြင်းသည် e-Sports ၏မူလအစဖြစ်သည်။. ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများအိမ်များသို့ဝင်ရောက်, အင်တာနက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူယနေ့ e-Sports သည်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။.
ယနေ့တွင်အမျိုးသားနှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများစွာကိုကျင်းပကြသည်။. ဤပြိုင်ပွဲများသည်ကစားသမားများယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်အားကစားသမားများ၏အယူအဆများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။. ၎င်းသည်နေ့စဉ်နှင့်တရားဝင်ကျင်းပသောတရားဝင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပြိုင်ပွဲအရေအတွက်နှင့်ပြသထားသည့်စိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာသည်။, ထို့ကြောင့် e-Athletes များအနေဖြင့်၎င်းအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။. ယခု e-Sports ပြိုင်ပွဲသည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာအထိပါ ၀ င်သည်, အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရာနှင့်ချီသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။. ရာနှင့်ချီသော e-Sports ကလပ်များကို E-Sports ၏နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများနှင့်စပွန်ဆာအမျိုးမျိုး၏လက်အောက်တွင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးထိုကလပ်များသည်အားကစားကလပ်တစ်ခုကဲ့သို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်နေကြသည်။, အမျိုးမျိုးသောလိဂ်များနှင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အခါပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကိုခိုင်ခံ့စေ။. ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ e-Athletes များအနေနှင့်အားကစားသမားလိုင်စင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်။. တူရကီ၌တည်၏ 2014 ၏အဖြစ်လိုင်စင်ရနိုင်ငံများဝင်ရောက်ခဲ့သည်.
ပို့ကုန်ဆိုတာဘာလဲ? Bora Koçyiğitက Fanatik သို့ပြောကြားခဲ့သည်!
Riot Games မှ DOTA တီထွင်သူ Steve တစ်ယောက် “Guinsoo” ၎င်းသည်အခြေခံ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး DOTA သည် Feak ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။. ကြောင်း၏ခြားနားချက် DOTA ကနေဂိမ်း၌တည်ရှိ၏အဖြစ်” နှင့် “ရန်း” စနစ်ရှိတယ်. DOTA နှင့်မတူသည်မှာ LOL တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောသူရဲကောင်းများ၏စွမ်းရည်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောထည့် ၀ င်မှုများသည်ဤအရာများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။. အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်တူရကီအတွက်သီးခြားဆာဗာဤသည်ဆက်ဆက်တူရကီအတွက်ဂိမ်းနှင့်ဌာနခွဲဖြစ်ပါတယ်. ငါတို့နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်များအကြား Riot ဂိမ်းများအားဖြင့်, တူရကီဖြစ်သင့်သည်, နှင့်တူရကီတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောတရားဝင်ပြိုင်ပွဲဖွဲ့စည်းထားပါသည်, ဤဖြစ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံး e-Sports ပွဲဖြစ်သည်။. ဂလာတာဆာရီ, Beşiktaşနှင့်Fenerbahçeတို့တွင်အသင်းများလည်းရှိသည်.
ဒိုတာ2ဘယ်လိုကစားမလဲ?
ရှေးခေတ်နှင့်ဆက်စပ်ကာကွယ်ရေး(ဒိုတာ) Warcraft III အတွက်မဟာဗျူဟာဂိမ်းအတွက်ထုတ်လုပ်သည့် mod တစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည်, Icefrog တီထွင်သူ၏ဂိမ်းကုမ္ပဏီ Valve နှင့်သဘောတူညီချက်အရ DOTA2အမည်ရှိ Warcraft III ကို၏လွတ်လပ်သော, ကြောင်းသီးခြားဂိမ်းအဖြစ်တင်ခဲ့သည်.
ဒီဂိမ်းကိုလူငါး ဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့နှစ်သင်း၏ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်. ဂိမ်းအစတွင်ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်သူရဲကောင်းဖြစ်သည်(သူရဲကောင်း) ရွေးချယ်သည်. ထိုအခါသူသည်အခြားသူရဲကောင်းများနှင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ထားသောမိကျောင်းများကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးသောကစားသမားများဖြစ်သည်။. ဂိမ်းတွင်ရှိသောအခြားသူရဲကောင်းများနှင့်သတ္တဝါများကိုသတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပိုက်ဆံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုရရှိနိုင်သည်၊ သင်၏အသွင်အပြင်များကိုအဆင့်မြင့်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်၊ သင်၏ငွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်သူရဲကောင်းကို ၀ ယ်နိုင်သည်။. ဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်းတစ်သင်းချင်းစီ၏အဓိကအဆောက်အ ဦး ကိုသူတို့၏ထောင့်တွင်ကာကွယ်ရန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အသင်း၏ထောင့်ရှိအဓိကအဆောက်အအုံကိုဖြိုချရန်ဖြစ်သည်။. ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ပထမဆုံးအဖွဲ့သည်အနိုင်ရရှိသည်. အပျော်တမ်း / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်းများကစီစဉ်ကြသည်။. (E-Bergi ကိုအသုံးပြုထားသည်)